R/W ROOBLE oo ka hadlay xaalada dalka iyo khilaafka isaga iyo Farmaajo. | Warbaahinta Ayaamaha
R/W ROOBLE oo ka hadlay xaalada dalka iyo khilaafka isaga iyo Farmaajo.
MUQDISHO-AYAAMAHA-Ra’iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya, Maxamed Xuseen Rooble oo khudbad ka jeediyey munaasabadda hadal-jeedinta musharixiita Aqalka Sare ee Somaliland oo ka socota Teendhada Afisyoone ayaa ka hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan khilaafka haatan kala dhexeeyo madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday.
Khilaaf kasta iyo is-qab-qabsi kasto wuxuu dhammaanayaa, marka ay doorashadan noo hagaagto,” ayuu sii raaciyey ra’iisul wasaaruhu.
Hadalkaan ayaa u muuqda in khilaafka isaga iyo madaxweynaha uu yahay mid adag. Sidookalena kiiska Ikraan Tahliil uu meesha kasiibaxayo oo ilaa hada aan wax natiijo ah laga gaarin.